လူငယ်များ ဖိနှိပ် ခွဲခြား ဆက်ဆံခံရလျှင် အစွန်းထွက်သမားများ၏ စည်းရုံး ခံရမည် | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« ဘုန်းကြီးတွေ လူလိုမသိဘူး If monks stay above the politics, we all will pay utmost respect but if they play dirty-terror politics for the generals
Rebel Kachin Leader Says Trust in Burma Is Low »
လူငယ်များ ဖိနှိပ် ခွဲခြား ဆက်ဆံခံရလျှင် အစွန်းထွက်သမားများ၏ စည်းရုံး ခံရမည်
အလ်ဟဂ်ျဦးအေးလွင် ဆွေးနွေးတင်ပြရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဘာသာပေါင်းစုံ၊ လူမျိုးပေါင်းစုံရှိကြောင်း၊ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာကို လူအများစု ကိုးကွယ်ကြပြီး၊ အစ္စလာ သာသနာမှာ ဒုတိယ အများဆုံး ဖြစ်ကြောင်း၊ ခန့်မှန်းချေ အစ္စလာမ် ကိုးကွယ်သူ (၈) သန်း အထက်တွင် ရှိကြောင်း၊
ယခုအခါ ဘာသာရေးကို နိုင်ငံရေး အလို့ဌာ အသုံးချ၍ ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေး အသွင် သဏ္ဍာန်ဆောင်သည့် ပဋိပက္ခများကို နောက်ကွယ်မှ ကြိုးကိုင်၍ စနစ်တကျ ဖန်တီးနေကြောင်း၊
လူငယ်များ အဖိနှိပ်ခံရလျှင်၊ ခွဲခြား ဆက်ဆံခံရလျှင် အစွန်းထွက်သမားများ ၏ စည်းရုံးခြင်း ခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း ၊
အကြမ်းဖက်နှင့် အစွန်းထွက်မှုကို ကာကွယ်ရန် တရားမျှတမှုနှင့် လူအခွင့်အရေး အပြည့်အဝ ပေးရန် လိုအပ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပြီး၊
ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန်နှင့် တမန်တော်၏ အမ်ိန့်သြဝါဒ အကိုးအကားများနှင့် အစ္စလာမ်၏ ငြိမ်းချမ်းရေး မတူကွဲပြားမှုကို နားလည်လက်ခံရေး၊ အစွန်းလွတ်တရားစသည့် တို့ကို တင်ပြခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
လူငယ်များ ဖိနှိပ် ခွဲခြား ဆက်ဆံခံရလျှင် အစွန်းထွက်သမားများ၏ စည်းရုံး ခံရမည်ဟု အစွန်းရောက်ဝါဒ တိုက်ဖျက်မှု ကမ္ဘာ့ညီလာခံတွင် အလ်ဟဂ်ျ ဦးအေးလွင်ပြောကြား
ဒီဇင်ဘာ ၅ ၊ ၂၀၁၄
အီဂျစ်နိုင်ငံ အလ်အဇ်ဟရ် တက္ကသိုလ်မှ ကြီးမှူး ကျင်းပသော အကြမ်းဖက်မူနဲ့ အစွန်းရောက်ဝါဒ တိုက်ဖျက်မှု ကမ္ဘာ ညီလာခံ (Al-Azhar Conference for Confronting Extremism and Terrorism ) ကို ဒီဇင်ဘာ (၃ – ၄) ရက်တို့တွင် အီဂျစ်နိုင်ငံ ကိုင်ရိုမြို့မှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ ညီလာခံကို ရှိုက်ခွလ် အဇ်ဟရ် အီမာမ် အက်ဘရ် ရှိုက်ဒေါက်တာ အဟ်မဒ် တိုင်ယေဘ် ဦးဆောင် ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာနိုင်ငံ အသီးသီးမှ အစ္စလာမ်သာသနာ့ ပညာရှင်များ၊ ခေါင်းဆောင်များ၊ Coptic Pope, Vatican အပါအဝင် ခရစ်ယာန် Church ကျောင်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အကြမ်းဖက်မူ ခံစားနေရသော လူမျိုးစု ကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
အဆိုပါညီလာခံသို့ မြန်မာနိုင်ငံမှ အစ္စလာမ်ဓမ္မဗိမာန် ဦးဆောင်သြရေးမှူးနှင့် ဘာသာပေါင်းစုံ ချစ်ကြည်ရေး အဖွဲ့ဝင် ကာဒရီယာ အာလီယာ ခလီဖွှာ အလ်ဟဂ်ျ ဦးအေးလွင် တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
အလ်ဟဂ်ျဦးအေးလွင် ဆွေးနွေးတင်ပြရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဘာသာပေါင်းစုံ၊ လူမျိုးပေါင်းစုံရှိကြောင်း၊ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာကို လူအများစု ကိုးကွယ်ကြပြီး၊ အစ္စလာ သာသနာမှာ ဒုတိယ အများဆုံး ဖြစ်ကြောင်း၊ ခန့်မှန်းချေ အစ္စလာမ် ကိုးကွယ်သူ (၈) သန်း အထက်တွင် ရှိကြောင်း၊ ယခုအခါ ဘာသာရေးကို နိုင်ငံရေး အလို့ဌာ အသုံးချ၍ ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေး အသွင် သဏ္ဍာန်ဆောင်သည့် ပဋိပက္ခများကို နောက်ကွယ်မှ ကြိုးကိုင်၍ စနစ်တကျ ဖန်တီးနေကြောင်း၊ လူငယ်များ အဖိနှိပ်ခံရလျှင်၊ ခွဲခြား ဆက်ဆံခံရလျှင် အစွန်းထွက်သမားများ ၏ စည်းရုံးခြင်း ခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း ၊ အကြမ်းဖက်နှင့် အစွန်းထွက်မှုကို ကာကွယ်ရန် တရားမျှတမှုနှင့် လူအခွင့်အရေး အပြည့်အဝ ပေးရန် လိုအပ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပြီး၊ ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန်နှင့် တမန်တော်၏ အမ်ိန့်သြဝါဒ အကိုးအကားများနှင့် အစ္စလာမ်၏ ငြိမ်းချမ်းရေး မတူကွဲပြားမှုကို နားလည်လက်ခံရေး၊ အစွန်းလွတ်တရားစသည့် တို့ကို တင်ပြခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
အဆိုပါညီလာခဲ့တွင် ရှိုက်ခွလ်အဇ်ဟရ် အပါအဝင် အစ္စလာမ်သာသနာ့ ပညာရှင်များ၊ ခေါင်းဆောင်များက အကြမ်းဖက်မူနဲ့ အစွန်းရောက်ဝါဒကို ရှုတ်ချခဲ့ကြပြီး အစ္စလာမ် အမည်ခံပြီး အကြမ်းဖက်မူများကို ပြင်းထန်စွာ ကန့်ကွက်ကြောင်းသိရပါတယ်။
အကြမ်းဖက်မူနဲ့ အစွန်းရောက်မှု ဖြစ်ပေါ်စေရန် တွန်းပို့တဲ့ ဘာသာရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွါးရေး အကြောင်းခံများကိုလဲ ထောက်ပြဝေဖန် ခဲ့ကြကြောင်း သိရပါတယ်။
This entry was posted on December 6, 2014 at 1:42 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.